Wareegto kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha waxaa Guddiga looga saaray Guddoomiyihii Guddiga Maaliyadda Cali Cabdi Cusmaan, Gudoomiye ku xigeenkiisii Maxamed Aadan Mocalim iyo xoghayihii Guud ee GuddigaXildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur. Waxaana lagu bedelay sadex xildhibaan oo cusub.
Wareegtada ayaa lagu sheegay in Guddoonka Baarlamanka ay go’aankan gaareen markii ay arkeen khilaaf ka dhex taagnaa Guddiga Maaliyadda.
“Annaga oo qadarinevna muddada maalmaha ah ee ka harsan dhamaadka xilli miisaaniyadeedka 2018. waxaa la farayaa Xubnaha guddiga sare ku xusan inay iska soo dhex doortaan Guddoomiye, Guddoomiye ku-xigeen iyo Xoghaye isla maalinta qoraalkan ku taariikheysan yahay. iyada oo la farayo Xoghayaha inuu u fududeeyo guddiga in uu guto waajibkan” ayaa lagu soo gabagabeeyay wareegtada Gudoomiyaha Baarlamanka.
Kala dirista guddigan ayaa imaaneysa todobaad un ka dib markii baarlamanku uu sheegay in xubnihii soo gudbiyay mowshin xil ka qaadis oo ka dhan ahaa Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ay ka laabteen ka dib wada hadallo , iyo iyadoo mowshinku uu u buray markii uu buuxin waayay shuruuridihii uu ku ansixi lahaa.
19kii bishii la soo dhaafay ee November ayaa Guddiga Maaliyadda u gudbiyeen Golaha Shacabka Baarlamaanka Federalka Soomaaliya warbixin ka koobneyd 14 bog oo ay ku eedeeyeen Wasasaradda Maaliyadda iyo Maamulka Gobolka Banaadir wax isdaba marin maaliyadeed. Arrintaas oo muran xooggan ka dhex dhalisay baarlamanka iyo Xukumadda.
Dabayaaqaddii isla bishaasi November ayaa wareegto kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha oo uu ku saxiixnaa guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamanka, Cabdi Weli Ibraahim Muudey lagu sheegay in la kala diray xubnaha Guddigga, iyadoo sababta loo kala diray lagu macneeyay mid la xiriirtay “khilaaf meel sare gaaray oo ka dhex jiray xubnaha guddiga.”
Kala diristaasi waxaa xilligaa ka hor yimid Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Cabdiraxman oo hadda ay ka soo baxday wareegtadan guddiga looga saaray sadexdii xubnood ee ugu sareysay.